Onye nnọchi anya Solana kacha mma!
Mkpụrụ ego obodo mbụ na onye nnọchianya nke gburugburu ebe obibi Solana.
Soro anyị ka anyị nyere gị aka na ụwa nke cryptocurrency!
Otu esi azụta
Akụkọ ihe mere eme nke Samoyedcoin Project
N'ime ịrị elu nke "memecoins" na Solana na 2021, Samoyedcoin (SAMO) mụrụ n'ihe gbasara crypto mogul. Sam Bankman-Fried na Solana's Co-guzobere Anatoly Yakovenko. N'ịhụ ikike nke obodo ndị dị n'ịntanetị, uru nke Solana, na mmetụta mkpụrụ ego nkịta nwere n'ịbanye n'ahịa ọhụrụ, na-ere ahịa blockchain ha, na ịbanye n'ọdịbendị nke oge a, SAMO si na "memecoin" nweta ego. ego obodo 3.0 webụ nnwale.
Na isi ya, SAMO bụ akụ dijitalụ na-apụta nke na-akwado obodo gbadoro anya na ịbanye ndị ọrụ Solana, ịkụziri ndị na-eso ahịa ahịa, ime njikọ onwe ha, na inyere ibe ha aka ịnya ndụ. Ọ bụ ezie na anyị bụ mkpụrụ ego nkịta kacha ọsọ, kacha rụọ ọrụ nke ọma na nke nwere enyi na egwuregwu, anyị na-achọ ịbụ ỌZỌ karịa nke ahụ; anyị na-achọ ịbụ onye nnọchi anya Solana.
Na isi obodo Samo Famo dị n'ọhụụ anyị, ebumnuche anyị na atụmatụ anyị:
Ọhụụ: Mee ngwa ngwa nkuchi, mmepe na uto nke gburugburu ebe obibi Solana.
Ozi: Mepụta Samoyedcoin dị ka onye nnọchi anya Solana site na ịkwanye oke nke ihe ga-ekwe omume maka obodo Weebụ 3.0.
Susoro: Nye ndị na-eso ahịa ihe ọmụma, akụrụngwa, na obodo ka ha nwee ike ịnyagharịa Solana, crypto na ndụ nke ọma.
Kedu ka esi azụta $SAmo?
Ụzọ kachasị mfe iji sonyere Samo Famo bụ ịnweta paws gị na ụfọdụ $SAMO!
Ị nwere ike ịzụta $SAMO site na mgbanwe Centralized (CEX) ma ọ bụ mgbanwe mgbanwe (DEX), dị ka Orca ma ọ bụ Raydium.
Mgbanwe nke etiti
Zụta na mgbanwe agbanwebeghị
Jide n’aka na ị gbanweela ego gị na Solana (SOL) site na iji mgbanwe ọ bụla (Coinbase, Binance, FTX, Kraken, wdg).
Mepụta obere akpa Solana (anyị na-akwado Phantom) wee ziga SOL na adreesị obere akpa Phantom gị.
Maka mgbanwe dị mfe, anyị na-akwado iji Orca, Raydium, ma ọ bụ Jupiter.
Na saịtị ọ bụla, pịa bọtịnụ dị n’elu-aka nri iji ‘Jikọọ’ obere akpa gị.
Ugbu a ị nwere ike ịgbanwe SOL gị maka SAMO. Biko cheta ịhapụ obere SOL maka ụgwọ mgbanwe.
Ekele, ị bụzi akụkụ nke Samo Famo!
Ọmụmụ nke $SAMO, nke mbụ memecoin wuru na Solana.
13% nke max $SAMO butere ndị otu obodo anyị.
Agba nke mbụ nke $SAMO ọkụ (2.1%) na 1.4% nke oke $SAMO na-ekesa na asọmpi meme.
A na-akpọ 5% nke max $SAMO ọkụ na mmemme iji sọpụrụ Anatoly Yakovenko na adreesị efu.
$SAMO na-etolite ndụmọdụ Samo dị ka ntinye ya maka 2021 Solana Season Hackathon.
A na-akpọ 5% nke max $SAMO ọkụ na mmemme iji sọpụrụ Sam Bankman-Fried na adreesị efu.
Ebutere atụmatụ ọkụ 54% nke oke $SAMO iji mee mmemme mmalite nke oge okpomọkụ Solana. A na-akpọ akara nde 500 ọkụ n'otu ụbọchị ọ bụla kwa ọnwa.
Edepụtara SAMO na Gate.io
SAMO weere ọkwa dị ka 3rd kasị ukwuu "memecoin" dị ka CoinMarketCap.
OKEx ndepụta Samoyecoin
SAMO nwetara ndekọ $103M n'ime olu ahia awa 24.
BetDEX na-ekwupụta mmekorita na ịnakwere SAMO maka wagers n'elu ikpo okwu ha na-abịa.
SAMO ịma aka mgbatị ahụ nke afọ ọhụrụ
Mweghachi SAMO Raids
Malitegharịa asọmpi SAMO Meme
Mepụta SAMO Academy
Ẹkedori "More SAMO Mondays"
Akwụkwọ akụkọ Crypto "The Watchdog" kwa izu
SAMO "Ụlọ Nzukọ nke Memes"
Chọgharịa wee malite "SAMO DAO"
Pọdkastị "Nkịta Alpha".
Nzukọ SAMO IRL
Na-achụ ndepụta mgbanwe etiti
Nyochaa mmekorita gburugburu ebe obibi
Gaa n'ihu na-ere ahịa SAMO
Ndị otu SAMO
SAMO Community nkwado
-5% nke ngụkọta $ SAMO gbara ọkụ iji sọpụrụ Anatoly Yakovenko.
-Dị ka $Samo nrubeisi maka 2021 Solana season Hackathon, Samo mepụtara Samo Tips.
-5% nke ngụkọta $ SAMO gbara ọkụ iji sọpụrụ Sam Bankman Fried.
Gaa n'ihu na ebumnuche anyị ịbụ mkpụrụ ego obodo na-achụ iji weta ihe ọchị na mmata na gburugburu ebe obibi Solana.
"Nkịta Alpha" oghere Twitter
Chọọ ndepụta mgbanwe
Kedu mgbe Samoyedcoin ($SAMO) malitere?
Mmalite nke Samoyedcoin malitere na Eprel 2021, mgbe ndị guzobere SAMO batara na mbụ na gburugburu ebe obibi Solana n'etiti ịrị elu nke ọtụtụ ọrụ DeFi ama ama. Mgbe ha hụrụ Solana n'anya, ndị otu ahụ chọpụtara ohere iji tinye ntakịrị "ihe ọchị" na gburugburu ebe obibi, nke mere ka a mụọ SAMO.
Ọ bụ ezie na ebidobere ya dị ka mkpụrụ ego meme, SAMO etolitela ka ọ bụrụ mkpụrụ ego obodo nnwale nke na-akwado obodo ndị sonyere n'ahịa na-elekwasị anya na ịnyagharị gburugburu ebe obibi crypto, na-enyere aka ịkụziri na ịbanye ndị ọrụ ọhụrụ, na ime njikọ ogologo ndụ bara uru n'ụzọ. N'ịhụ mmetụta obodo zuru ụwa ọnụ nwere na 2021 (dị ka Reddit's notorious r/WallStBets subreddit), SAMO achọpụtala ohere ịkpọkọta ndị na-anụ ọkụ n'obi crypto nwere otu echiche ịhapụ akara anyị na crypto na ụwa.
Kedu ihe mere SAMO dị iche na ndị ọzọ?
N'ihi uru nkà na ụzụ nke Solana, SAMO na-arụ ọrụ nke ọma, eco-friendly, na ụkọ karịa "mkpụrụ ego nkịta," dị ka Dogecoin (DOGE) na Shiba Inu (SHIB). Ọ bụ ezie na anyị na-anya isi na ịbụ ụdị ego nkịta kacha mma na egwuregwu ahụ, anyị na-achọsi ike karịa nke ahụ. Anyị na-achọsi ike ịbụ ihe ntinye na ịzụ ahịa maka gburugburu ebe obibi Solana, na mgbakwunye na obodo zuru ụwa ọnụ ebe onye ọ bụla nwere ike isonyere iji mụtakwuo banyere gburugburu ebe obibi Solana wee gafee ya ọnụ.
N'adịghị ka ndị ọgbọ anyị, ndị obodo SAMO (nke a na-akpọ "The Samo Famo") kwenyere na ịzụlite enweghị shill, enweghị esemokwu, nghọta, omenala nnwere onwe bụ ụzọ kacha mma ịga n'ihu. N'ụzọ dị mwute, ọtụtụ mkpụrụ ego meme na mkpụrụ ego obodo na-adabere na omume na-adịghị mma taa. Ọtụtụ na-eji tokenomics aghụghọ, na-achụso mgbasa ozi ahịa ike ike naanị maka ekele ọnụahịa, na-agba ndị òtù ha ume ka ha jiri aka ike kwalite mkpụrụ ego ha, na ọbụna jiri teknụzụ akpaghị aka (nke a makwaara dị ka "bots) gbasaa mmata site na mgbasa ozi mgbasa ozi. iji nye obodo na-akwụsighị ike na enweghị eziokwu, SAMO kpachapụrụ anya zig mgbe ndị ọzọ zag.
Gịnị kpatara Solana blockchain?
SAMO họọrọ iwulite na Solana ọ bụghị naanị n'ihi ohere iji gbakwunye ọmarịcha ụdị ejiji memeing, kamakwa n'ihi uru teknụzụ Solana. Dị ka ọ na-adị taa, azụmahịa na Solana na-ewe ihe na-erughị otu sekọnd iji wuchaa, na-efu ihe dị nta nke penny izipu ($0.00025), ma jiri ike dị ka ọchụchọ Google. Ọ baghị uru ikwu, Solana bụ blockchain kacha arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi.
Kedu ihe m ga-eme na $SAMO na SAMO NFT?
Ndị nwe $SAMO na SAMO NFT nwere ike nweta ohere pụrụ iche na ọwa VIP na mmemme na Discord anyị. N'ọdịnihu, ndị na-ejide ha abụọ ga-enwe ike ịnweta SAMO DAO.
Ọ bụghị naanị nke ahụ, ma $SAMO nwere ike ji mee ihe gafee dị iche iche Solana dabeere nyiwe, dị ka Cropper Finance, Orca, Raydium, Solend, Nzọụkwụ Ego, na-adịghị anya BetDEX.
N'ikpeazụ, SAMO NFT na-enye ụzọ ọzọ maka ndị obodo iji jikọta njirimara ha na ntanetị na Samo Famo ka ha wee gosi ụwa na ha bụ akụkụ nke obodo anyị. Ndị nwe ya nwekwara ike dee akụkọ nke ha na SamoStories.app ma gbazinye NFT ha Sharky.fi iji nweta SOL
Ka anyị na-eto eto na ahịa, ihe mgbakwunye maka $SAMO na SAMO NFT ga-adị maka ndị na-ejide ya.
Kedu ihe bụ ọhụụ, ebumnuche na atụmatụ SAMO?
Ihe ngosi SAMO: Mee ngwa ngwa nkuchi, mmepe na uto nke gburugburu ebe obibi Solana.
Ọrụ SAMO: Mepụta Samoyedcoin dị ka onye nnọchi anya Solana site na ịkwanye oke nke ihe ga-ekwe omume maka obodo Web 3.0.
Usoro SAMO: Nye ndị na-eso ahịa ihe ọmụma, akụrụngwa, na obodo ka ha nwee ike ịnyagharịa Solana, crypto na ndụ.
Ụlọ akwụkwọ SAMO (akwụkwọ ndị na-adịbeghị anya)
Ụlọ Nzukọ SAMO nke Memes